Daawo:-Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Rag dhac xoog leg geystay – HORUFADHI MEDIA |
Daawo:-Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Rag dhac xoog leg geystay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun ku riday Askar ka tirsan Ciidanka dowladda oo Carwo ku taalla degmada Hodan gaar ahaan Taleex ka qaatay Teleefano iyo agab kale oo electronic ah oo qiima ahaan ku kacayo $12945 Dollar.
Labada Askari ee dhaca geystay oo lagu kala magacaabo Faarax Cabdullaahi Calasow Faaraxey iyo Maxamed Abshir Maxamed Camey ayaa Carwo kaah ee Taleex ka qaatay IPHONE, SAMSUNG iyo agab kale oo electronic, kuwaasi oo ku kacayey lacag dhan $12945.
Laba Alifle Boliis Faarax Cabdullaahi Calasow “Faaraxey” ayaa u gacan galay Ciidamada Dowladda labadii July oo isla xilligaasi lagu wareejiyay Hay’adda dambi baarista Boliiska CID. Baaris dheer kadib ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyay billowgii August sanadkan Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida.
Sidoo kale Dable Asluub Maxamed Abshir Maxamed “Camey” ayay Maxkamadda amar soo qabasho iyo hor keenis maxkamadeed ah u jartay hay’adaha amniga 26-kii September sanadkan.
DAAWO:-MW Bixii oo ka hadlay dadkii Somaliland kasoo masaafurisay Laascaanood
Ciidamo howlgal qorsheysan ka fuliyay Kismaayo iyo Dad badan oo lagu qabtay